Burcad-badeed Soomaali ah oo afduubatay markab ka diiwaan gashan Liibiya, lana timid xeebaha Laasqoray. – Radio Daljir
Lasqoray, Feb 04 ? Koox burcad-badeed Soomaali ah ayaa afduubtay markab nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan wadan Liibiya, kaasi oo siday shixnad dhan 4,900 oo tan, sida laga soo xigtay shirkaddii markabkaasi u rarnaa oo fadhigeedu yahay Tripoli.
Kooxda burcad-badeedka ah, ayaa markabkaan ka soo qafaalatay meel ku dhaw biyaha wadanka Yemen, waxayna markabkaasi haatan la tilmaamayaa burcaddu in ay soo gaarsiiyeen xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan xeebta degmada Laasqoray.
In ka badan 20 shaqaale ah ayaa markabka saaran kuwaasi oo u kala dhashay dhawr waddan oo adduunka ah, waxaana la tilmaamayaa xaaladdoodu in ay tahay mid wanaagsan oo dhammaantood ay ka badbaadeen weerar burcaddu ay markabka ku qabsanayeen.
Markabka oo haatan ku xiran biyaha degmada Laasqoray ayaa waxaa ku sii habqamaya kooxo burcad-badeed ah oo kala duwan, kuwaasi oo dhaqdhaqaaqooda laga dareemaya degmada Laasqoray iyo deegaannada ku hareeraysan.
Dadka degmada Laasqoray ayaa dareen caro ku dheehan tahay ka muujiyey maraakiibta burcaddu ay soo qafaashaan isla markaana ay ku soo xirtaan xeebaha demada Laasqoray, waxaana qaar ka mid ah mas?uuliyinta Laasqoray oo Daljir la xiriirtay ay sheegeen in ay ku dhaqaaqi doonaan tallaabo kasta oo burcadda ay kaga sifaynayaan deegaannadooda.
Dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ayey ahayd markii burcad-badeed Soomaali ah markab afduuban oo laga leeyahay wadanka Masar ay ku soo xirteen degmada Laasqoray, waxaana muddo kadib bad-maaxayaashii Masaarida ahaa u suurto gashay in ay furtaan markabkood kadib markii ay awood u sheegteen burcaddii iyagoo qaar ka mid ahna burcadda nolol ku kaxaystay.
Weerarada burcad-badeedda ayaa bilihii ugu danbeeyey sii xoogaysanaysay, waxaana haatan gacanta burcadda ku jira in ka badan 15 gaadiidka badda ah, kuwaasi oo ay afduub u haystaan burcad-badeeddu.